अब राजीनामा दिने पालो अग्नी सापकोटाको ! – GALAXY
अब राजीनामा दिने पालो अग्नी सापकोटाको !
सभामुख अग्नी सापकोटाको समेत कुर्तुत बाहिरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको चर्चा चलिरहेकै बेला सभामुखले समेत भाग खोजेको तथ्य बाहिरिएको हो ।
सरकारले सभामुख सापकोटाका छोरा रुपक सापकोटालाई चिनका लागी नेपाली राजदुत बनाउँने तयारी गरेको छ । सभामुखको कुर्तुतपछि विश्लेषकहरुले अब राजीनामा दिने पालो सापकोटाको हो भन्दैं प्रश्न गरेका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजदुत बनाएका सबैलाई सरकारले एकमुष्ठ फिर्ता बोलाए पछि अहिले धमाधम सरकारले राजदुत नियुक्ती गर्न लागेको छ । चिनका लागी नेपाली राजदुत सापकोटालाई बनाइने करिब पक्का जस्तै भएको छ ।
भारत, अमेरिका र बेलायतका लागी सरकारले राजदुत सिफारिस गरिसकेको छ , चिनका लागी नेपाली राजदुत माओवादी केन्द्रको कोटामा परेको र अग्नीका छोरा रुपक राजदुत बन्न लागको बताइन्छ । सरकारले पछिल्लो समय अमेरिका, चीन र भारतका राजदूतलाई मन्त्रीस्तरीय सुबिधा दिने गरेको थियो
अब प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा बेलायतबाट फर्किएपछि चीन लगायत अन्य देशका राजदूत नियुक्त हुने बताइएको छ । चीनको लागि नेपाली राजदूतमा सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा रुपक सापकोटालाई पठाउनेबारे छलफल भइरहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।
चीनमै भूराजनीतिको विषयमा अध्ययन गरेका सापकोटाले यसै साता कात्तिक ७ गते परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका छन् । राजदूतको लागि लबिङ भइरहेका बेला सापकोटाले आकर्षक पदबाट राजीनामा दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
सापकोटा युवा कुटनीतिज्ञ हुन् । सरकारले सिफारिस गरेमा दावाफुटी शेर्पापछि उनी सम्भवतः सबैभन्दा युवा राजदूत हुनेछन् । सापकोटाले चीनको रेनमिन विश्वविद्यालदययबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।
उनी चीन मामिला विज्ञका रुपमा समेत नेपालमा स्थापित हुन खोजिरहेका छन् । रुपकलाई राजदूत बनाउनेबारे प्रचण्ड सकारात्मक रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काले चीनजस्तो विशाल छिमेकी देशमा परिपक्व राजदूत पठाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।